Wiil 7 jir ah oo $22 milyan ka sameeya Youtube-ka – AwKutub News
Leave a Comment on Wiil 7 jir ah oo $22 milyan ka sameeya Youtube-ka
Sida ay qortay majalladda Forbes ee looga hadlo hodantinimada adduunka ayaa lagu sheegay in sannadkii wiilkan yar uu sameeyo $22 milyan doolar, lacagtan oo aysan ku jirin canshuurtii laga qaadi lahaa iyo qarashaadkii kale.
Akhri : 5 Tallaabo oo kuu suuraggelinaya inaad caan ka noqoto Baraha Bulshada.
kala sareynta kanaalada youtube-ka ee lacagta badan helay
Qalabka ay carruurta ku dheelaan ee kusoo baxa kanaalka Ryan ayaa la sheegay in markiiba la wada iibsado.
Bishii Agoosto, shirkadda Walmart ayaa soo saartay qalan gaar ah oo lagu xardhay magaca Ryan.
Maadaamaa uu weli ilmo yahay, 15% ka mid lacagta uu sameeyo ayaa lagu xareeyaa sanduuq bangi gaar ah, wuxuuna isticmaali karaa marka uu qaangaaro.
Tags: Caalamka Lacagley Wararka Youtube
Previous Entry Dilka Khashogji : Agaasimaha Hay’adda CIA-da oo faahfaahinta kiiska Khashogji laga waraysanayo
Next Entry Ninkii Daacish qoor-goynta u qaabilsanaa oo la dilay